ကမ်ဘာကြျောပုဂ်ဂိုလျတှေ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျအဖွဈ သူတို့တှေ ပွောငျးလဲကုနျကွပွီ….
ကမ်ဘာကြျောပုဂ်ဂိုလျတှေ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျအဖွဈ သူတို့တှေ ပွောငျးလဲကုနျကွပွီ…. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် သူတို့ တွေ ပြောင်းလဲကုန်ကြပြီ…. ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း ဘောလုံး မက်စ်ဇူကာဘတ် fb တီထွင်သူ ဘီလ်ဂိတ် ကွန်ပျူ တာတီထွင်သူ စတီဗ်ဂျော့ apple ဥက္ကဌ ဘက်ဂီယို ဘောလုံး ကလင်းစမန်း ဘောလုံး ဘရိုင်ယမ်ရော့ဆင် ဘောလုံ်း […]
အချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းတဲ့ Oသွေးလေးတေရဲ့အကြောင်း
အချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းတဲ့ Oသွေးလေးတေရဲ့အကြောင်း အိုသွေး… အမတန် အစသန် ရောက်တဲ့ နေရာမှာ ပျော်အောင် နေတက်တယ် အသေးမွား ကိစ္စတွေကို ထုတ်မပြောဘူး အမတန် နှုတ်လုံတယ် ဘယ်သူကိုမှ ကုန်းမတိုက်တက်သူ သူ စိတ်မပါရင် စကားတောင် မပြောဘူး တချို့သူတွေ ပြောတယ် လေကုန်မှာ စိုးလို့လား […]
မိုးရွာပြီးနောက် အပင်သစ်တွေ ပေါက်လာနေပြီဖြစ်တဲ့ သြစတျေးလျ
မိုးရွာပြီးနောက် အပင်သစ်တွေ ပေါက်လာနေပြီဖြစ်တဲ့ သြစတျေးလျ သြစတေးလျ တောမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝမ်းနည်းစရာတွေ ကြားရတာ စိတ်ညစ်လာပြီဆိုရင် ဝမ်းသာစရာလေး နည်းနည်းလောက် ပြောင်းပြောမယ်နော် အခုဆိုရင် မီးဒဏ်သင့်ထားလို့ သေဆုံးနေတဲ့ သစ်ပင်တွေနားမှာ ဟိုနေ့က မိုးရွာလို့ ရွက်သစ်တွေ၊ အပင်သစ်တွေနဲ့ အသက်ပြန်ဝင်လာပါပြီ။ ပုံတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ အပင်ပေါက်လေးတွေက မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာပေးသလို […]
သင့်အိမ်မှာ သရဲ ရှိနေကြောင်း သိရှိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာများ
သင့်အိမ်မှာ သရဲ ရှိနေကြောင်း သိရှိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာများ ၁။ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ အကြောင်းမဲ့ မာန်ဖီခြင်း သင့်ခွေးက အခန်းတစ်ခန်းကိုပဲ အကြောင်းမဲ့ ထိုးဟောင်းနေသလား ။ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်လေးတွေက အကြောင်းမဲ့ မာန်ဖီခြင်းတွေနဲ့ ထူးခြားတဲ့ အပြုအမူတွေ ပြုလုပ်လာပြီဆိုရင် သူတို့က သင်မမြင်နိုင်တဲ့ အရာ တစ်ခုခုကို […]
သားသတ်ရုံကိုမပို့ဖို့ ဒူးထောက်တောင်းပန်နေရှာတဲ့ သနားစရာ နွားမကြီး (ရုပ်သံ)
သားသတ်ရုံကိုမပို့ဖို့ ဒူးထောက်တောင်းပန်နေရှာတဲ့ သနားစရာ နွားမကြီး (ရုပ်သံ) နွားမကြီးဟာ ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာကြီး ဖြစ်နေပေမယ့် သားသတ်ရုံကို ပို့ဖို့အတွက် နွားခြံထဲကနေ ကြိုးနဲ့ဆွဲထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူသတ်ခံရတော့မှာကို အလိုလိုသိနေတဲ့ နွားမကြီးဟာ ကြိုးစားပြီး ရုန်းကန်ရှာပါတယ်။ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ လူတွေရဲ့ ဆွဲရာခြံအပြင်ဘက်ထိ ပါလာပြီး ကားပေါ်ကို တင်ကာနီးဆဲဆဲမှာ ရှေ့ခြေထောက်ေ လးနှစ်ချောင်းကို […]
ယောက်ျားတွေကို စိတ်ပျက်သွားစေနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ပုံစံ (7) မျိုး
ယောက်ျားတွေကို စိတ်ပျက်သွားစေနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ပုံစံ (7) မျိုး သင့်မှာ လှပထူးချွန် ထက်မြက်ပြီး မိန်းကလေး ချင်းတောင် အားကျရတဲ့ သူငယ်ချင်း မျိူးရှိ ပါလိမ့်မယ်။ သူမအနေနဲ့ အချစ်ရေးအဆင်မပြေတာမျိူး၊ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ အဆင်မပြေတာမျိူး ကြောင့် စိတ်ညစ် နေရတဲ့ အခါ သင်အံ့သြမိပါလိမ့်မယ်။ အရာရာ […]
ဝါနေတဲ့သွားတွေကို လုံးဝဖြူသန့်သွားစေမယ့် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းများ
ဝါနေတဲ့သွားတွေကို လုံးဝဖြူသန့်သွားစေမယ့် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းများ အလှတွေပြင်စရာမလိုဘဲလှနိုင်မယ့်နည်းလမ်းမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကို လူတိုင်းသိချင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အလှတွေပြင်စရာမလိုဘဲလှနိုင်မယ့်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ အပြုံး ပါပဲ။ အပြုံးလေးလှရင်လူလည်းလှသွားပါတယ်။ အပြုံးလေးလှဖို့အတွက် သွားလေးတွေလည်းလှဖို့လိုပါတယ်။ သွားလေးတွေလှချင်ရင် သွားဝါတာ၊ကွမ်းဂျိုးနဲ့ကျောက်ဂျိုးတွေကို ဒီနည်းတွေသုံးပြီးဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါတစ်ဇွန်းနဲ့ဆားအနည်းငယ်ကိုရောပြီး ရေစိုနေတဲ့သွားပွတ်တံလေးနဲ့တို့ယူကာ သွားတိုက်သလိုပဲတိုက်ပေးပါ။ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ပုံမှန်တိုက်ပေးရုံနဲ့ ဖြူသန့်နေတဲ့သွားလေးတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ လိမ္မော်ခွံ လိမ္မော်သီးစားပြီးရင် လိမ္မော်ခွံကို […]
ဆငျးရဲလို့ ပနျးရောငျးနရေပမေယျ့၊ ကောကျရတဲ့ iPhone ကို ရဲစခနျးလာအပျတဲ့ မောငျနှမနှဈဦး
ဆငျးရဲလို့ ပနျးရောငျးနရေပမေယျ့၊ ကောကျရတဲ့ iPhone ကို ရဲစခနျးလာအပျတဲ့ မောငျနှမနှဈဦး ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားတိုင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မာနတွေ၊ အတ္တတွေ၊ အလိုလောဘတွေဆိုတာ တူညီကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အရပ်အနိမ့်အမြင့် ရှိသလို၊ လူချင်းတူလည်း အသက်ရှုကွဲကြပါတယ်။ တစ်ချို့က ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်တယ်၊ တစ်ချို့က ချစ်ခင် သနားတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ […]
ရွှေစက်တော် ဘုရားဖူးသွားမယ့်သူများအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်း
ရွှေစက်တော် ဘုရားဖူးသွားမယ့်သူများအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်း မန်းရွှေစက်တော် ဘုရားရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေ အားလုံးခံစားစေနိုင်ဖို့အတွက်မျှဝေတာပါ နှစ်ပေါင်းများစွာကကြားခဲ့ရတဲ့။တည်းခိုဆောင်အခန်းဈေးကြီးတဲ့ကိစ။ အရင်တုံးက ဈေးပြိုင်စံနစ်နဲ့ ။ ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့က လေလံပြစ်တယ်။‌ လေလံစွဲယူတဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေ အပြိုင်စွဲကြတော့ ဈေးတွေက အဆမတန်မြင့်သွားကြတော့။ သူတို့ကိုက်အောင် (အမြတ်အစွန်းရအောင်)‌ အခန်းခတွေဈေးတင် ။ အခန်းခက တွေဈေးကြီးတော့တာပေါ့။ အခုနှစ်တော့ အဲဒီ့ […]
မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောကွီး ဆှမျးအလှူခံကွှလမျးမပျေါတှငျအသကျမဲ့နှယျရှငျလမျးလြှောကျ…ဗီဒီယို အွန်လိုငျးမှာနာမညျကွီးနေ
မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောကွီး ဆှမျးအလှူခံကွှလမျးမပျေါတှငျအသကျမဲ့နှယျရှငျလမျးလြှောကျ…ဗီဒီယို အွန်လိုငျးမှာနာမညျကွီးနေ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ဗန်းမောက်မြို့နယ်၊ရွှေနှစ်တောရ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီး ဆွမ်းအလှူခံကြွလမ်းမပေါ်တွင်အသက်မဲ့နွယ်ရှင်လမ်းလျှောက်… ဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီး ဆွမ်းအလှူခံကြွလမ်းမပေါ်တွင်အသက်မဲ့နွယ်ရှင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ထူးခြား video ရုပ်သံ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီး ဆွမ်းအလှူခံကြွလမ်းမပေါ်တွင်အသက်မဲ့နွယ်ရှင်လမ်းလျှောက်… စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ဗန်းမောက်မြို့နယ်၊ရွှေနှစ်တောရမှာ အသက်မဲ့နွယ်ရှင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ video ပါ.. unicode စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊ဗနျးမောကျမွို့နယျ၊ရှနှေဈတောရ မဟာဗောဓိမွိုငျဆရာတျောကွီး ဆှမျးအလှူခံကွှလမျးမပျေါတှငျအသကျမဲ့နှယျရှငျလမျးလြှောကျ… ဗောဓိမွိုငျဆရာတျောကွီး ဆှမျးအလှူခံကွှလမျးမပျေါတှငျအသကျမဲ့နှယျရှငျလမျးလြှောကျနတေဲ့ ထူးခွား video […]